Dhawaaqyadda Taban Ee Soomaaliya Waxa Dabadda Ka Riixaysa Dawladda Djibouti!! [FAALLO]
Tuesday March 13, 2018 - 11:51:00 in Wararka by Reporter Burco
Hargeysa(QorilugudNews)- Markii la bilaabay Mashruuca horumarinta Dekedda berbera, waxay ahayd 11/5/2016-ka, waxaanna hadda laga jooggaa laba Sannadood, iyaddoo muddadaasi soo martay Marxaladdo kala duwan oo mid weliba lahayd duruufteedda.
Hargeysa(QorilugudNews)- Markii la bilaabay Mashruuca horumarinta Dekedda berbera, waxay ahayd 11/5/2016-ka, waxaanna hadda laga jooggaa laba Sannadood, iyaddoo muddadaasi soo martay Marxaladdo kala duwan oo mid weliba lahayd duruufteedda. waxaanna hadda laga jooggaa laba Sannadood, iyaddoo muddadaasi soo martay Marxaladdo kala duwan oo mid weliba lahayd duruufteedda.
Xaaladdahaas kala duwan waxa ugu mudnayd oo ugu danbaysay heshiiskii Saddex geesoodka ahaa ee 1/3/2018-ka ay ku kala saxeexdeen Magaalada Dubia, dawladdaha Somaliland, Ethiopia iyo Shirkadda DP World. Markii ay Saddexdan dhinac ee Somaliland, Ethiopia iyo Shirkadda DP World ay qallinka ku duuggeen, waxa bilaabmay buuq iyo sawaxan lagaga soo horjeeddo Heshiiskaas saddex geesoodka ah.
Dalalka sida wayn heshiiskaas uga hor yimid waxa ka mid ah dawladda taagta daran ee Muqdisho lagu Ilaaliyo, waxaannay Xukuumaddaas itaalka yarri muujisay sida ay uga soo horjeeddo Horumar kasta oo ay shacabka Somaliland gaadhaan. Ra’iisal-wasaarraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyr oo maalin kadib, magaalada Muqdisho kaga hadlay Heshiiskaas saddex geesoodka ah ee Somaliland, Ethiopia iyo Shirkadda DP World, ayaa waxa uu yidhi
"Waxaan rabbaa in aan Shacabka Soomaaliyeed u caddeeyo qayb kama nihin, cidna kamaanu wada-hadal arrintaas. Warsaxaafaddeedkii Wasiirka Dekeddaha dawladda faderaalka Soomaaliya. Mawqifka ku cad Warsaxaafaddeedkaas weeye aragtidda dawladda federaalka Soomaaliya, macnaheeddu waxa weeye heshiiskasta oo la gallaayo oo Masiirriya oo ku saabsan Deked ama Kheyraad dalka meelkasta oo ay tahay waxa u igman oo kaliya dawladda federaalka, ansixintiisana waxa u igman Baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya” Ayuu yidhi Ra’iisal-wasaarraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyr.
Ha-yeesheehadalkan Ra’iisal-wasaarraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyrre markaad u fiirsato ujeeddooyinka iyo Masaaliixda uu ka leeyahay maaha kuwo ka turjumaayo jacaylkiisa iyo Nacaybkiisa ku saabsan Horumarinta Dekedda berbera, balse waa arrin ay cid kale Diiddan tahay oo Shaqsiyaadka hormoodka u ah dawladda taagta daran ee Muqdisho loo adeegsannaayo ceebbaynta iyo sheegashadda aan Sharcigga ku fadhiyin ee dawladda Soomaaliya ku damcayso inay isku hor taagto Maal-gelin ay Shirkadda DP World ku samaynayso Dekedda Caalamiga ah ee magaalada Berbera ee jamhuuriyadda Somaliland. Waxaad si koobban isku waydiisaa DP World waxay Somaliland joogtaa muddo dheer oo haatan ku siman laba Sanno, ilaa wakhtigaas cid Diiddan, cid Neceb, cid dhaliilsan lama arag, haddii ay siddaa tahay maxaa keennay Dhawaaqyadda taban ee ka soo baxaaya Dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo? Akhriste ha raaddin Su’aal kale waxaad ogaalkaaga ku haysaa in Shirkadda DP World iyo Dawladda Djibouti ay isku dhaceen oo xidhiidhkooddii xumaadday, arrintooddunna haatan u gudbi doonto Maxkamad Caalamiya, sidaa darraadeed Dhawaaqyadda iyo Diidmooyinka ka imannaaya Soomaaliya waa kuwo ay ka danbayso Dawladda Djibouti ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Akhriste aan kula waddaago tusaale yar oo koobban, isla markaanna aad ku fahmayso heerka ay Dawladda Djibouti ka taagan tahay Qaddiyadda madax-bannaanida Somaliland, waxaannay kuu muujinnaysaa Cadaawadda gaamurtay ee Dawladda Djibouti u hayso Shacabka iyo Dawladda Somaliland. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo aad ugu faraxsan go’aanka diidmada ah ee ay dawladda federaalka Soomaaliya kaga fal-celisay saxeexa heshiiskii horumarinneed ee ay wada gaadheen Somaliland, Ethiopia iyo Shirkadda DP World.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo qoraal koobban soo dhigay barka uu ku leeyahay Twitterka, taasoo muujinnaysa sida uu uga xun yahay in Maal-gelin lagu sameeyo Dekedda berbera, inkastoo dalalka Somaliland iyo Djibouti aannay marnaba heshiis ku noqon karrin Masaaliixdoodda guud ee Dhaqaale iyo Maal-gashi, waanna sababta ay Dawladda Djibouti caddowga ugu aragto dalka Somaliland, sidaa awgeed Djibouti waxay adeegsannaysaa dawladda Muqdisho si ay uga hor timaaddo danaha iyo Masaaliixda ay wadaagaan Somaliland, Ethiopia iyo Shirkadda DP World.
Sidoo kale, Xukuumadda uu hoggaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa la is waydiin karraa ilaa heerkee bay Daacad ka tahay hirgelinta iyo difaacidda Masaaliixdeedda? Somaliland ma Djibouti bay raali gelin mise Maal-gelinta Dekedda berbera iyo Saldhiga Milatari ayay ku dhiiran doontaa? Madaxweynaha Somaliland waxa uu hakiyay Bayskii Milatari ee dalka Imaarraatku ka samaysannaayay magaalada Berbera, iyaddoo ay jiraan tuhunno daaha ka rogaaya in hakinta Bayskaas Milatari ahayd caddaadis ay dawladda Djibouti saartay Madaxweynaha Somaliland Mudane, Muuse Biixi Cabdi.
Somaliland haddii ay Difaacayso Maal-gashiyadda iyo Heshiisyadda Caalamiga ah ee ay la gasho Shirkaddaha, Dawladdaha iyo Hay’addaha caalamiga ah waxa la gudboon inay si toosa uga hor timaaddo cidda soo faro-gelisa Masaaliixdeedda.